Hay'ada Ceymiska ee Försäkringskassan oo la kulantay dhaleeceyn Xoogan Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaHay’ada Ceymiska ee Försäkringskassan oo la kulantay dhaleeceyn Xoogan
Hay’ada Ceymiska ee Försäkringskassan oo la kulantay dhaleeceyn Xoogan
March 30, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Qof kasta oo aan shaqeyn karin oo xanuunsan muddo dheer wuxuu caawimaad ka heli karaa lacagta Hay’adda Caymiska Bulshada.
Tani waxay sidoo kale khuseysaa dadka naafada ah ee aan shaqeyn karin.
Lacagta waxaa lagu magacaabaa lacagta jirrada iyo gunnada hawlqabadka. Lacagtu aad ayey muhiim ugu tahay dadka inay awoodaan inay iska bixiyaan kirada iyo cuntada.
Försäkringskassan ayaa marka hore baareysa in qofku xaq u leeyahay lacagta iyo in kale.
Hayada caymiska bulshada ayaa hada heleysa cambaareyn sida ay u shaqeeyaan. Försäkringskassan ma baarto dadka intaanay ku odhan maya.
Sidaas waxaa yiri hey’adda ISF oo hubisay shaqadeeda Hay’adda Caymiska Bulshada.
In ka badan hal qof Marka la eego Tobankii ayaa hela maya wakaaladda caymiska bulshada ayaa laga yaabaa inay ogolaansho siin helaan haddii Hay’adda Caymiska Bulshada ay si fiican u shaqeyso. Waxaa ku qoran ISF.
Dad badan oo wax ka weydiiyay arimaha lacagtooda ayaa sidoo kale jawaabo xun ka helay
Hay’adda ceeymiska bulshada ee
sababta aysan lacag u helin.